Suu 67 – ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူတူ မြန်မာပြည်အနှံ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုကြ | MoeMaKa Burmese News & Media
Suu 67 – ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူတူ မြန်မာပြည်အနှံ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုကြ
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဇွန်၁၉ ၊ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို မြန်မာပြည်အနှံအပြားတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်းပလျှက်ရှိရာ ပုဇွန်တောင် ၃ ရပ်ကွက် NLD ရပ်/ကျေး တွင် သံဃာတော် ၆၇ ပါးအား ဆွမ်းလောင်းပွဲကျင်းပစဉ် တွေ့ရပုံ။
4 Responses to Suu 67 – ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူတူ မြန်မာပြည်အနှံ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုကြ
su on June 19, 2012 at 4:48 pm
zaw on June 19, 2012 at 7:01 pm
Happy birthday mother. Pls long live for us .We love you much.
hmw on June 19, 2012 at 8:25 pm
day Mother su
မောင်ပျာလောင် on June 20, 2012 at 4:09 am
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို မြန်မာပြည်အနှံအပြားတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်းပလျှက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ ရ တဲ့အတွက် ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ သို့ သော် ချောင်းသာ အဖွဲ့ ချုပ်က မွေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဂဏန်း ၆၇ ကောင်ကို ဘေးမဲ့ လွှတ်ပေး ခဲ့တယ်လို့အာ အက်ဖ် အေ ကကြေငြာသွားတာကို ကြားသိရတဲ့အတွက်၊ ဘုရား ဘုရား အားလုံး ရှေ့ တဲ့တဲ့သွားကြတာလား၊ ဘေးတိုက် ထွက်သွားကြတာလား လို့ စိတ်ပူမိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဂဏန်းတို့ ရယ် ဘေးတိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ပြန် ဖြစ်ဖြစ် မသွားဘို့ ပညာမဲ့တစ်ယောက်ကဆုတောင်းနေပါတယ်။